Men in Black3(2012) | MM Movie Store
ဒီ MIB3မှာလဲ အရငျလို Agent K နဲ့ J ကို ပွနျမွငျကွရအုံးမှာပါပဲအရမျးဆိုးရှားလှနျးလို့ အာကသ ထဲမှာ အဆငျ့ဆငျ့ ပိတျလှောငျထားတဲ့အကဉျြးထောငျထဲက ဘိုးရဈ ဆိုတဲ့ ဂွိုလျသားတဈကောငျ ရှိပါတယျသူနဲ့ အေးဂငျြ့ ကေ မှာ ရနျညိုး ရနျစ တဈခု ရှိနတေယျ…အေးဂငျြ့ ကေ ကွောငျ့ ဘိုးရဈ ရဲ့ လကျတဈဖကျ ပွတျသှားဖူးပါတယျ
နောကျဆုံးမှာ အေးဂငျြ့ကေ က မသတျပဲ အရှငျဖမျးပွီး အကြဥျးထောငျမှာလုံခွုံရေး တငျးကပျြစှာ ခြူပျနှောငျထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…တဈရကျမှာတော့ ဘိုးရဈ တဈယောကျ အပွငျက အကူအညီ နဲ့အကဉျြးထောငျက လှတျမွောကျသှားပွီး အေးဂငျြ့ ကေ ကိုလကျစားခဖြေို့ ကွံစညျပါတော့တယျ…
သူလကျစားခမြေယျ့ အစီအစဉျကတော့ အေးဂငျြ့ ကဘေိုးရဈကို မဖမျးခငျ အခြိနျကို ပွနျသှားပွီး သတျဖို့ပါပဲ…ဘိုးရဈ ရဲ့ အစီအစဉျ အောငျမွငျသှားတယျ ထငျတာပါပဲအေးဂငျြ့ကေ ကို သတျလိုကျနိုငျပွီး အခြိနျစကျဝိုငျးကပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါတယျ….
အေးဂငျြ့ ကေ ကို လူတိုငျးက မသှေ့ားပမေဲ့အေးဂငျြ့ ဂြေ တဈယောကျထဲ မှတျမိနပေါတော့တယျအခြိနျစကျဝိုငျး ထဲ ပွနျသှားပွီး ပွုပွငျဖို့ အေးဂငျြ့ ဂြေ မှာတာဝနျရှိလာခဲ့သော အခါ….
ဒီ MIB3မှာလဲ အရင်လို Agent K နဲ့ J ကို ပြန်မြင်ကြရအုံးမှာပါပဲအရမ်းဆိုးရွားလွန်းလို့ အာကသ ထဲမှာ အဆင့်ဆင့် ပိတ်လှောင်ထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲက ဘိုးရစ် ဆိုတဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ကောင် ရှိပါတယ်သူနဲ့ အေးဂျင့် ကေ မှာ ရန်ညိုး ရန်စ တစ်ခု ရှိနေတယ်…အေးဂျင့် ကေ ကြောင့် ဘိုးရစ် ရဲ့ လက်တစ်ဖက် ပြတ်သွားဖူးပါတယ်
နောက်ဆုံးမှာ အေးဂျင့်ကေ က မသတ်ပဲ အရှင်ဖမ်းပြီး အကျဉ်းထောင်မှာလုံခြုံရေး တင်းကျပ်စွာ ချူပ်နှောင်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…တစ်ရက်မှာတော့ ဘိုးရစ် တစ်ယောက် အပြင်က အကူအညီ နဲ့အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်သွားပြီး အေးဂျင့် ကေ ကိုလက်စားချေဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်…
သူလက်စားချေမယ့် အစီအစဉ်ကတော့ အေးဂျင့် ကေဘိုးရစ်ကို မဖမ်းခင် အချိန်ကို ပြန်သွားပြီး သတ်ဖို့ပါပဲ…ဘိုးရစ် ရဲ့ အစီအစဉ် အောင်မြင်သွားတယ် ထင်တာပါပဲအေးဂျင့်ကေ ကို သတ်လိုက်နိုင်ပြီး အချိန်စက်ဝိုင်းကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်….
အေးဂျင့် ကေ ကို လူတိုင်းက မေ့သွားပေမဲ့အေးဂျင့် ဂျေ တစ်ယောက်ထဲ မှတ်မိနေပါတော့တယ်အချိန်စက်ဝိုင်း ထဲ ပြန်သွားပြီး ပြုပြင်ဖို့ အေးဂျင့် ဂျေ မှာတာဝန်ရှိလာခဲ့သော အခါ….
Merlin Season 1 (Episode 5)
White Lily – Link 1
Merlin Season 1 (Episode 12)
Crazy Love – Link 2
The Great (Season 1) အပိုငျး (၈)